तीन लघुवित्तले घोषणा गरे लाभांश, कसको कति ? – Insurance Khabar
तीन लघुवित्तले घोषणा गरे लाभांश, कसको कति ?
प्रकाशित मिति : १ भाद्र २०७६, आईतवार १२:५७
काठमाडौँ । तीन वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को लागि लाभांश धोषणा गरेका छन् । लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीहरुमा आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् ।
ग्लोबल आएएाई लघुवित्तले असार मसान्तसम्ममा कायम रहेको चुक्ता पूँजीको ३५ प्रतिशत बोनश शेयर र बोनश शेयर कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव ८४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीको साउन ३२ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले सो मात्रामा लाभांश प्रस्तावको घोषणा गरेको हो ।
त्यस्तै, नेपाल एग्रो लघुवित्तले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतले हुन आउने ७४ लाख ६६ हजार ६७० नगद लाभांश र सो वापत लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ३ लाख ९३ हजार २४५ रुपैया दिने भएको छ ।
कम्पनीको गत साउन ३२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०७५ /०७६को नाफाबाट शेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
त्यसैगरी आशा लघुवित्तले
गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लघुवित्तले बोनस शेयर वापत लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.६३ प्रतिशत नगद लाभांश समेत वितरण गर्नेे प्रस्ताव गरेको छ ।
लघुवित्तको साउन ३१ गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंक स्वीकृति तथा लघुवित्तको आगामी साधारण सभाले पारित गरे पश्चात मात्र शेयरधनीले पाउने छन् ।